Kuzvichenesa zvikadaro Mazino Your Nyore | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Posts tagged "Kuzvichenesa zvikadaro Mazino Your Nyore"
Kuzvichenesa zvikadaro Mazino ako With Ava Nyore
Kana akafunga pamusoro rakanga rachena mazino ako asi vakanga nguva dzose kutsoropodza kwacho uye havana chokwadi apo kutanga, unofanira kuverenga pamusoro. Uchawana siyana mazano ari munyaya ino kuti akubatsire kunzwisisa rakanga rachena mazino zvesangano, zvichiita kuti vabudirire bast migumisiro zvinogoneka.
Tarisa panze nokuti staining zvokudya zvakananga pashure rakanga rachena kurapwa. Meno ako achaita kuti yakasvibiswa nyore kamwe vasina whitened. pashure rakanga rachena, edza kugara kure zvokudya uye zvokunwa riri rima ruvara. Dzivisa kofi zvikurukuru nokuti inogona kupinda pamusoro rukoko mazino ako uye kuderedza nokupenya kunyemwerera kwako.
ZANO! Shandisa makemikari mafuta womukokonati dzinongoitika mazino zviitwe. Swishing mafuta kumativi muromo wako nokuda kumativi gumi maminitsi zuva anogona zvinobudirira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako.
Lemons uye maranjisi ndiwo zvinoshamisa tsime Vitamin C, asi vanogona kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Edza vachidzipukuta mukati ari remoni kana orenji svuura chokuzora pamusoro mazino ako kuti andodzitora akachena. Unogona kunyange kuwedzera zvishoma munyu kuti rinokwatuka kuwedzera migumisiro zvinoonekwa kuti nzira iyi kuuya.
Kushandisa kubikira mushaba kukwesha mazino enyu. Kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako sezvingatarisirwa, kubikira mushaba anoshanda zvinoshamisa. Iva nechokwadi kukwesha zvinyoronyoro paaishandisa kubikira pasoda, rinogona kutowedzera mazino mamwe vanhu.
ZANO! Kuti mukaravhani zviitwe mushonga wemazino kushandiswa peroxide uye kubikira pasoda kusanganiswa yakaenzana mativi. Shandisa muvhenganiswa ichi kukwesha mazino enyu kwemaminitsi gumi.
Chinhu chokutanga unofanira kuitei kuti awane chena mazino kuti nguva dzose kupinda mazino cleanings. Wana mazino enyu vakachenesa mwedzi mitanhatu ose uye kuti kugadzwa wauchazoroorana apo muhofisi wako kuchenesa uno.
Kunwa mvura yakawanda iri nzira huru kubatsira kuchengeta mazino enyu chena. Kunwa mvura yakakwana kuchaita sukurudza muromo wako, wokudzivisa echitema kubva kuvaka pamusoro mazino enyu. It muitiro wakanaka kunwa mvura, kunyanya panguva uye pashure kudya.
ZANO! Want mazino ako kutarisa akachena? Idya apuro. Maapuro vane hasha kwazvo uye ivo vachava kuchenesa mazino wako nekukurumidza pasina kukonzera chero kuvadza enamel mazino ako.
Idya zvokudya utano; mbishi zvokudya akafanana michero kana miriwo kana uchida kuona mazino akachena. Edza kusiyana zvokudya zvakadai apo zvichibvira kubatsira mazino ako arambe utano. Unofanirawo kudzivisa snacking yakawandisa kana uchida kuchengeta kunyemwerera yako yakajeka.
Shandisa uswa paunenge kunwa chero mvura rima. A uswa whitens mazino kuburikidza kudzikira nguva zvinotora chinwiwa chako chidodzi mazino. By Achinanga pasi huro uye rine zvishoma kuonana nevanhu enamel, pane zvishoma staining uye discoloration.
ZANO! Mushure rakagara mazino rakanga rachena nzira, zvakakosha kuti chete iwe kunwa zvakajeka mvura kwemazuva dzinenge matatu mana. Mumazuva iwayo okutanga, nemhando mavara zvose kubva zvibereko yerima zvinwiwa zvinogona kunyatsoziva kupinda mazino ako.
Kana pane korona mumuromo mako, mazino enyu kuzvichenesa zvikadaro; zvisinei, korona yako icharamba ruvara chete.
Kana nokukurumidza uye kubudirira ndiwo yako pamusoro mazino-rakanga rachena pokutanga, enda kuna chiremba wemazino yako ASAP. Pane zvazvakanakira kuti mazino zviitwe anogona kukupa zvaunoda, kunyange rinogonawo kuva zvakaipa uyewo. Kuchenjera kubvunza chiremba wemazino ako pamberi vanoedza kuzvichenesa zvikadaro mazino ako, kuti vave nechokwadi chokuti vari utano, uye echitema havasi kupiwa kunokonzerwa kumunetsa. Play wakachengeteka; akamisa zano ane utano uye inobudirira kuti rakanga rachena mazino ako chiremba wemazino kubatsirwa.
ZANO! Kana uchisvuta, wako simba zvikuru chokushandisa nokuti rakanga rachena mazino wako kurega tsika. Hazvina musoro kushandisa mari iri mazino rakanga rachena zvinhu kana ukaramba kusvuta.
Kukwesha mazino ako pashure ose kudya kuchabatsira kuti muvachengete echitema. Ichi ichokwadi kana totaura kofi.
Kukwesha mazino ako kunobatsira kuvadzivirira. Sarudza mushonga wemazino yakanaka, munhu anorwa in uye zvinobatsira kuzvichenesa zvikadaro mazino. Kune pezvitsiga siyana, saka kutsvakurudzwa kunogona kukubatsira kuwana munhu anoshandira mazino ako.
ZANO! Kana waronga nezvokuchera waya kufamba ndakaisa simbi mumakumbo mune ramangwana, mumwe dzokurumbidza ndechokuti imi kuzvichenesa zvikadaro mazino enyu pamberi muitiro kunotanga. Kana ukatora zano iri, iwe achapedzisira meno dzisiri chete straighter, asi akachena uyewo.
Kunwa mvura kazhinji achakubatsira meno akachena. Rinsing mazino ako nemvura kunogona usukwe inoramba anogona kukonzera zino discoloration. Ngaive tsika yako kunwa mvura pamwe zvokudya zvenyu uye panguva kudya.
Kurega kushandisa mouthwash. Kucheka mouthwash kubuda hwako kuti kugadzirisa nyaya unenge une pamwe kuramba mazino machena. Mouthwash rinoumbwa zhinji inokuvadza makemikari. Vamwe mishonga izvi zvinogona aizonyatsovachenesa uye discolor mbeu mazino ako.
ZANO! Imwe nzira yokubatsira mazino kuramba chena ndiko kunwa zvinwiwa zvakawanda. Zvinwiwa zvine coloring kuti discolors uye echitema mazino.
Kudya chizi pashure zvokudya kunogona kubatsira chicherwa kugutsikana mazino ako. Zvakatsvakurudzwa zvinoratidza kuti karusiyamu anopa mazino enyu enamel mukana kuvakazve.
Yakanakisisa mazino rakanga rachena muromo ndiko kushandisa walnuts omuti. Kushandisa uku kwakadai nemakwati pameno unobereka guru zviitwe maturo, uye rinopawo kuchenesa zvakadzika. Unofanira sukurudza kubuda mumuromo mako uye kwazvo kukwesha mazino enyu pashure kushandisa kuhukura.
ZANO! Baking mushaba rinogona kushandiswa senzvimbo zvinyoronyoro hasha mushonga wemazino kuti uyewo whitens mazino ako kana hwakakanyiwa peroxide. Kukwesha mazino enyu uchishandisa muvhenganiswa ichi nokuda mazino chaipenya pasina anokuvadza makemikari.
Kudya zvokudya vane crunch kunogona kubudirira chaizvo. Foods, kufanana twakadai setumakarotsi uye maapuro, kubatsira kuchengeta mazino ako akachena. Zvokudya zvine crunchy anogona kuchenesa mazino ako paunenge dzinodzeya. Chenjerai kuti ndivapedze avo ezvinhu yose, pane slicing kana dicing pavo.
ZANO! Udye zvakawanda dheri zvokudya. Zvinhu wakafa, mukaka uye yogati vane zvinovaka muviri mavari kuti pave simba, mazino utano-zvakasuruvara.
Unofanira kuziva kuti chero zviitwe gadziriro chete inoshanda dzinongoitika mazino. Kana uine mazino basa akadai veneers, veneers, Korona kana mumakomba pamberi muromo wako, havanganditendi kuchinja ruvara. Rakanga rachena kwako dzinongoitika mazino kungaita mazino basa nokubudisa akafanana kwazvo gunwe.
Edza kuva saltwater musanganiswa kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Sanganisa hafu yetea spoon dombo munyu pamwe chete mukombe nemvura uye izvozvo kugara ikoko anenge maminitsi mashanu. Kakaridza pamwe nemunyu mvura, pachinzvimbo mouthwash. chidobi Izvi zvinogona kubatsira kuderedza utachiona kushomeka uwandu in mumuromo mako.
ZANO! Various zvibereko kukupa yakachengeteka uye kubudirira sezvingatarisirwa kuti mazino enyu akachena. Semuyenzaniso, mastrawberry kunogona kubudirira chaizvo.
Apo zviumbwe hadzikwani zvakanaka, ari mishonga inogona kukanganisa chingamu nzvimbo nyore uye kukonzera bundu kana kuzvimba.
Kune vazhinji njodzi uye nyore nzira kuzvichenesa zvikadaro uye yakajeka mazino ako kuti murege arasikirwe mhanza. A Nzira kukuru kushandisa kushandisa kubikira pasoda. Pane toothpastes dzine kubikira pasoda paunogona kutenga, kana chete shandisa dziri kabati yako kumba.
ZANO! Musatora chikamu kusvuta pazvimonera kana midzanga. Izvi achaita zino discoloration.
Nepo rakanga rachena toothpastes havana simba dzimwe rakanga rachena nzira, vanogona kudzivirira kana kurasa echitema itsva. toothpastes izvi vanoshandisa silica hasha kusingadzokeri kukuvadza enamel.
Edza kushandisa dzimwe munyu kana iwe kukwesha mazino enyu. A nyore, asi inoshanda Wandinyengedzerei kuti rakanga rachena mazino yako kwokugeza mazino nomunyu. Unofanira sukurudza muromo wako kwazvo pashure mumwe Kukwesha. Nokuti hasha, usaora akukurwe pamwe kwokugeza mazino nomunyu.
ZANO! mushure kudya, kutsenga rakanga rachena chingamu akafanana Kutenderera Zuva kudzivirira kunyemwerera kwako. Dzimwe mhando chingamu vari afunga kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako.
Unofanira kukwesha, uyewo kushandisa pamatadza kukwiza muviri. Nzira yakanakisisa nechokwadi kunyemwerera yenyu inoramba chena ndiko kungozviona uye floss pashure kudya. Izvi zvinobvumira kuti kurasa zvokudya vakasara uye nebheji vasati kuvaka uye kukonzera chero kukuvadza.
A mabhanana svuura inogona kushandiswa paunenge kukwesha mazino enyu. Ichi zvidiki kuti vanhu vakawanda vanopika mabasa. Inotapukira pamusoro mazino ako mabhanana svuura asati kwokugeza mazino pavo. Zvadaro kukwesha imi mazino Saizvozvowo kuti nguva dzose kuita. Uchaona vatogamuchira nemazino ako.
Yellow mazino chiri nyore kuoneka chiratidzo munhu kuti munhu anosvuta mabhokisi. Zvingava zvakaoma kuramba yakajeka chena kana uchisvuta. Kana iwe unofanira uchisvuta, edza kusvuta zvishoma zvishoma saka unogona kuva vatano uye nani kutarira mazino.
Rakanga rachena mazino ako ndiyo nzira huru chaizvoizvo nani unhu hwako. mazino akachena kwete chete anoita kuti zvikuru ukwezve; kunokubatsira kuva nechivimbo munzanga. Uchaona kuti vakawanda kuda kubuda uye kuita zvinhu nevamwe vanhu. Shandisa mazano aya kuti maximize zvawanikwa ako, uye nokukurumidza uye afforadably kuzadzisa.
Posted by kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide - Chikumi 5, 2016 pa 12:32 AM
Categories: Home Based kuna kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tags: runako nyemwerera, Kupenya kunyemwerera kwako, kuzvichenesa zvikadaro mazino ako, Kuzvichenesa zvikadaro Mazino Your Nyore, rakanga rachena mazino ako